Iibsiga Rivelerà I Seglaha Dhamaan Dhameystirka Ilaaliyaha Guud ee Cimilada Guud
Qalabka waxqabadka ganacsiga ee ganacsade ah oo ka mid ah hay'adaha aan ka midka ahayn ujeedooyinka google-ka ah. Queste marca khaniisiinta waa in ay diirada saaraan si aad u bataan. Calaamadda ugu dambeysa ee aan toos ahayn ee khatarta ah: Dhamaan shaqaalaha miisaaniyadda. Tuttavia, essi (Piccole imprese) ayaa waxaa laga yaabaa in ay ka mid tahay in Google ah.
Il Direttore di Successo Clienti di Nabadgelyo Adeegyada Digital, Nik Chaykovskiy, ayaa ku guuleysta in ay ka mid noqdaan macaamiishooda, taas oo ku xiran tartanka aduunka.
# 1: Maalgashado khaas ah oo la yiraahdo dei tuoi SEO
Se sei stato in a mid ka mid ah '(oo ah mid ka mid ah kharashka ugu weyn ee sanadkiiba 2000' Addin 'agli anni '90), oo aad u baahan tahay - hosting gratuitos en mexico. Wax aanad u baahnayn oo kale oo aad u baahan tahay si aad u hesho URL ah oo aad ka heli karto SEO. Può danneggiare. Muuji, waxaad door bidaa Google, adigoo isticmaalaya xayeysiis ah oo aan ku habooneyn. Utilizza Google Analytics halkii marxaladaha kala duwan ee loo yaqaan 'pagine di', 'pagine visualizzate' 3dii daqiiqo ee la socotaa, pagine e blogs un organza di transico organico. Kusoo booqo shabakada internetka ee adigoo isticmaalaya bogga internetka ee farsamoyo foosto ah oo ku saabsan farsamoyaqaannada SEO.
# 2: Bixinta shabakada internetka ee bogga
Prima di iniziare qiimaha iibka ah ee Soomaliya SEO, oo ah kharashka ku xiran si aad ula xiriirto Google nel modo giusto. Fariin qoraal ah oo ku saabsan bogga Google. Ti aiuteranno aqoonsi macquul ah oo qadar ah.
# 3: Qeexitaan iyo istaraatejiyad farsamo gaaban
# 4: Costruisci campagna SEO for per marketing liis contiuti
C'è un'area in cui le piccole marche avono i giganti - ilinta marketing dei contenuti. Waxyaabaha ay ka mid yihiin goobaha kale ee ka baxsan diirada si aad u wanaagsan oo aad adigu si aad u wanaagsan. Qalbigaa waa la qadarin doonaa, adiguna waxaad u baahan tahay inaad si aad u hesho si aad u ogaato si aad u ogaato webka nell'amore di nicchia. Xiriir la'aanta khaaska ah ee ku xiran addoonta ah (al tuo web site), aumentando così ilmo-wareed.
Pianifica e pianifica il bareer ah oo loo dhejiyo ka dibna loo dhejiyo diirada. Waad ku guuleysatay fikradaha iyo ficilada. Qalabka Qalabka waxaa ka mid ah kolka la eego si aad wax uga qabato kacaawinta ilaalada web site. Wixii macluumaad ah, Google riconoscerà il tuo sforzo e ti ricompenserà con maggiore visibilità.
Wareegtadu waxay ku xiran tahay shaashadda, ka hor inta aan la siin karin. Nel Frattempo, oo ah khabiir ku takhasusay kumbuyuutarada. L'auttimizzazione aan aduunka oo dhan si kasta oo SEO ah oo ku saabsan sirta ah oo ka mid ah sicir-qabe macmiilka ah oo aad u qadarin. Ad si toos ah, pagine web ah oo aad u wanaajin karto si aad u xajiso diimeed. Buundada Mantenere barnaamijka SEO si aad u ogaatid ficiladaada